Igwe Laser Diode
Igwe Laser Nd Yag
Igwe ikuku nke CO2
Igwe SHR IPL
Usoro Slimming ahụ
Cryolipolysis igwe Coolplas
igwe Sincosculpt EM
Igwe PDT LED
Okwu mmeghe nke ụlọ ọrụ
Mweghachi laser nke ukwuu na Topsincoheren.
Naanị otu nnọkọ! Sayensị akpụkpọ ahụ: Lasers na-enye ọkụ na-achịkwa HSP ma ọ bụ protein ujo okpomọkụ. Nke a bụ isi uru karịa microneedling. N'ụzọ dị iche, m na-eji microneedling mgbe m na-achọghị okpomọkụ na epidermis / dermis - chee miri ọgwụ nnyefe. Okpomọkụ na-ebute nrụpụta collagen dị irè. Nhọrọ nke laser: CO2. Nkejighi. Ejiri ntọala atọ dị iche iche. Ka n'usoro na ...
Kedu ihe bụ Microneedling?
Microneedling bụ ọgwụgwọ magburu onwe ya iji belata ihe otutu, ihe otutu na hyperpigmentation. Usoro a na-akwalite uto nke collagen ọhụrụ na akpụkpọ ahụ gị, na-agba ume ka akpụkpọ ahụ gị gwọọ onwe ya, na-ebelata ọdịdị nke ice pickcar, boxcar, and rolling acne scars. Ebe oge oyi bụ oge zuru oke ịmalite Microneedling Topsincoheren na-enye gị 20% kwụsịrị ọgwụgwọ ihu n'ihu Novem a.
Mwepụ ntutu isi laser!
Emepụtara ikpo okwu 808 diode laser iwepụ ntutu dabere na ọganihu kachasị ọhụrụ na ọgwụ ịchọ mma na teknụzụ LASER. Ọ bụ ihe ọgbara ọhụrụ 810nm diode laser na-ejikọta n'otu ike na ọsọ nke ngwaọrụ nke na-enye anyị ohere ịme ọgwụgwọ dị irè na obere oge. Usoro mgbanwe ya nke teknụzụ 3 n'ime 1 pụtara na enwere ike ịgwọ ụdị ọrịa niile na-enweghị oke ...
Oge a, m ga-akọwa otu esi ewepụ ntutu isi.
A na-ekewa usoro ntutu isi n'ụzọ siri ike ・ Photoepilation ・ Mwepụ ntutu laser ahụike ・ Mwepụ ntutu agịga Enwere ike kewaa ya ụzọ atọ. Usoro nke iwepụ ntutu maka photoepilation na ọgwụgwọ laser ntutu isi bụ otu ihe ahụ. Site n'ìhè nke na-emeghachi omume na pigmenti a na-akpọ melanin na mgbọrọgwụ ntutu, ọ na-emebi anụ ahụ na-eto eto ma na-ewepụ ntutu. Agbanyeghị na mec ...
Kedu ihe bụ IPL laser?
IPL laser bụ ọkụ kacha ike pulsed ìhè (IPL) iji na-agwọ pigmenti, vaskụla ọnya & acne akpụkpọ. Na naanị 1-3 sessions IPL laser na-eme ka ọdịdị nke afọ tụrụ anya, mmebi anyanwụ, ọnya vaskụla, rosacea na freckles. Nke a na-enyere aka melite odidi na mgbochi ịka akpụkpọ ahụ. IPL laser na-anya isi nsonaazụ IPL kachasị ọsọ * Nchapụta na oge 1-3, ma e jiri ya tụnyere oge 4-5 na compe ...
Kedu ihe bụ Cleanance Acne?
Usoro ọgwụgwọ laser IPL a dị elu na-elekwasị anya na nje bacteria na akpụkpọ ahụ na-ebute ihe otutu. Mmeghachi omume foto dị ike na-eme, nke na-ebibi nje bacteria n'onwe ha. Site na ọgwụgwọ na-aga n'ihu, ọnụ ọgụgụ nke mbibi ihe otutu nwere ike ibu ibu karịa uto nke nje bacteria, na-eduga n'ibelata ọnya na-egbuke egbuke na ọbụna igbochi ọnyá ndị ọzọ. Ọ bụrụ na echiche nke ịbanye n'ime ...
Oge Ịkekọrịta Otu Topsincoheren
Ngalaba azụmahịa mba ụwa nke Sincoheren mere mgbanwe mmụta mmekọrịta ụbọchị anọ na nzikọrịta ozi. Onye ọ bụla na-esonye na-arụsi ọrụ ike, na-amụkọ ọnụ ma na-aga n'ihu ọnụ. Ịmụ + ikekọrịta + ọdịda. Ọ bụrụ na ị rapara na ya, ị ga-ahụ nnukwu ọdịiche. Ndị mmekọ Firewolf niile ga-arụsi ọrụ ike ma tinye onwe ha n'ọzụzụ, mmụta na ọrụ, ka ha wee nwee ike ịhụ t ...
Topsincoheren kpakpando igwe – 755 Sinco-Alex Yag laser igwe
Nhazi kacha ọhụrụ maka ụlọọgwụ gị! Jiri igwe laser Sinco-Alex Yag dị elu mee ka omume gị nwee 755nm & 1064nm wavelength. ọ na-enye gị mgbanwe azụmahịa na ọgwụgwọ na 755nm anyị na 1064nm wavelength teknụzụ na-agabiga ntutu isi ka ị na-emeso wrinkles, benign pigmented ọnya na vaskụla ọnya. Mgbanwe ahụ nwere ike ibute ego ọhụrụ ma kwalite ROI gị.
Diamond dermabrasion na-enye otu nsonaazụ ahụ dị ka dermabrasion kristal ọdịnala ebe ọ dịkwa mma maka ụdị akpụkpọ anụ ndị ọzọ nwere mmetụta. Ọ bụ usoro nnụcha akpụkpọ ahụ na-abụghị nke ịwa ahụ nke na-eji isi diamond na-adịghị mma na-eji nwayọọ kechie akwa akpụkpọ ahụ, wee wepụ ihe ndị ahụ yana unyi na akpụkpọ ọ bụla nwụrụ anwụ. A na-ejikarị Microdermabrasion eme ihe maka: * Nhicha dị omimi/nyochaa. * Ezughi oke...
ma shape X Device Approved by the FDA for its effectiveness and safe in the Treatment of: Localized Fat Cellulitis Body Remodeling 4 in 1 TECHNOLOGIES Infrared Radiofrequency Roller Massage Vacumtherapy Areas that we can treat Abdomen Flanks Thighs Glute us Ịnya uwe ogologo ọkpa Uru 1. Ndị na-adịghị na ya. ...
Ngwaahịa emelitere kacha ọhụrụ - 5D Hifu
Hifu bụ naanị usoro FDA kpochara, nke na-adịghị emerụ ahụ nke na-ebuli ma na-agbatị olu, agba na brow, ma na-emezi ahịrị na wrinkles n'ime obi. Hifu na-eji ike ultrasound nwalere oge iji bulie ma mee ka akpụkpọ ahụ sie ike n'onwe ya - na-enweghị ịwa ahụ ma ọ bụ oge nkwụsịtụ. Kedu ka o si arụ ọrụ: Nke a bụ ngwá ọrụ micro exfoliation n'ụlọ! Ị maara ebe m hụrụ ya n'anya - obere ahịrị dị n'elu egbugbere ọnụ m. Moisturizes, na-eme ọhụrụ ...
Coolplas ọ na-arụ ọrụ maka agba abụọ? Ee ọ na-eme! Jiri Coolplas kọwaa ahịrị agba gị!
Mmega ahụ n'agba agba abụọ anaghị arụ ọrụ, mana enwere ike akpụkpọ ahụ nwere ọgwụgwọ na-abụghị nke ịwa ahụ na-arụ. Coolplas! Coolplas bụ ọgwụgwọ na-ewepụ abụba n'okpuru agba na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla. Dị irè na-abụghị ịwa ahụ Ọ dịghị agịga na-ebibi mkpụrụ ndụ abụba Obere oge FDA-akwadoro Olee otú Coolplas si arụ ọrụ? Ọ na-eji jụrụ oyi na-achịkwa iji kpochapụ abụba ahụ siri ike nke siri ike ịtụgharị, ọbụlagodi ...
12345 Ọzọ > >> Peeji nke 1/5
Ndụmọdụ n'efu +86 137 1859 3357
ADERE 4th Floor, Block A, Jinyun Building, No.43, North Street, Xizhimen, Beijing